ICanal Elegance eYunderup - I-Airbnb
ICanal Elegance eYunderup
Mandurah, Western Australia, i-Australia
Leli khaya elisanda kufakwa ohlwini elingu-3 x 2 lezilwane ezifuywayo elinendiza yalo yangasese elintantayo lilinde ukubhukha kwakho manje.
Leli khaya elisanda kufakwa ohlwini elingu-3 x 2 lezilwane ezifuywayo elinendiza yalo yangasese elintantayo lilinde ukubhukha kwakho manje. Amakamelo amathathu okulala-master bedroom is a King bed, Queen beds kwamanye amagumbi amabili okulala, i-fold out queen couch yenza ukulala okunethezekile kwabangu-8 -nemibhede emibili egoqiwe eyodwa etholakalayo ukuze ingezwe. Itafula lephuli egaraji ukuze ulisebenzise. Pheka ekhishini lesimanje noma usebenzise indawo enkulu engaphandle enezihlalo eziningi kanye ne-BBQ, indawo ebanzi engaphambili ukuze ujabulele ukubukwa kwamahlengethwa, ama-pelicans namadada abavakashela njalo. Indlu ihlotshiswe ngobukhazikhazi kanye nempahla yesimanje. Kukhona ama-Kayak amathathu ahlinzekwe ngesikhathi uhlala ukuze uhlole imigudu yamanzi noma ubambe izinkalankala ezihamba emanzini uma ngesikhathi sonyaka, udoba emfuleni i-Murray wasendaweni noma uhambe ngomkhumbi ngesikebhe uye kwezinye izindawo zokudlela namahhotela asendaweni - ukuhlala kwakho endaweni. indawo izokhunjulwa kungakhathaliseki ukuthi uyisebenzisa kanjani. Alikho ilineni lombhede noma amathawula anikeziwe kodwa angacashunwa kuwo. Ilungele izilwane ezifuywayo ngenkokhelo yesilwane esifuywayo engu-$100, Imali Yokuhlanza engu-$100, Ibhondi engu-$1000. AKUKHO AMASHIYA/IMISEBENZI AVUMILE
Hlola ezinye izinketho ezise- Mandurah namaphethelo